ओलीले दुवै पद नछाड्ने भनेपछि अर्को रणनीतिमा नेताहरु - palpalko palpalko
Published on:4July, 2020 7:39 am
२० असार, काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न विवाद समाधानोन्मुख बनेको छ । शुक्रबार दुई अध्यक्षबीचको तीन घण्टा लामो छलफलपछि फुटको संघारमा पुगेको नेकपा विगत मा दुई पटक भएको सहमतीमा फर्कने संकेत गरेका छन् ।
‘दुई अध्यक्षबीच खुलेरै कुराकानी भएको छ’, अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा सँगै रहेका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले भने, ‘तर, विषयवस्तुमा ठोस सहमति भएको छैन। अर्को राउन्ड फेरि छलफल हुने भएको छ।’ छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि थिए। उनले पनि सञ्चारमाध्यमलाई ओली र दाहालबीच खुलस्त कुराकानी भएको र आफूलाई लागेका कुराहरू दुवै अध्यक्षले राखेको जानकारी गराएका थिए। ‘सम्बन्ध नट गुड, नट ब्याड ९न राम्रो, न खराब० भयो’, बैठकको उपलब्धिबारे बालुवाटार स्रोतले भन्यो।
अर्का एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, दाहाल बालुवाटार पुगेपछि भएको छलफलको प्रारम्भमै ओलीले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याउँदै भनेका थिए, ‘पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विषयमा कुरा गर्न आउनु भएको भए त्यो कुरै नगरौं, त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। त्यो कुनै सम्भावनै छैन, अरू केही कुरा छन् भने गरौं।’
त्यति मात्र होइन, दाहाललाई ओलीले शुक्रबारको छलफलमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल वा आफ्नो टिममध्ये कुनमा बस्ने रोज्नसमेत आग्रह गरेका थिए। ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले पार्टी एकता कायम गर्ने हो भने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुरा भएन, अर्को एउटा पनि निर्णय गर्नुहोस् तपाईंले मेरो टिममा बस्ने हो कि माधव नेपालको टिममा बस्ने हो ? फैसला गर्नुहोस्सम्म मलाई भन्नुभयो’, ओलीले आफूलाई राखेको प्रस्ताव सुनाउँदै दाहालले ब्रिफिङमा भने।
दाहालले भने पार्टीको निर्णयलाई मानेर जानुपर्नेमै ओलीलाई जोडबल गरेका थिए। ‘एकीकृत पार्टी भइसकेपछि कहाँ त्यस्तो हुन्छ रु तपाईं (प्रधानमन्त्री) ले त्यागको कुनै भावना नै देखाउनु भएन, यस्तो पनि हुन्छ ? ’ दाहालको यस्तो प्रश्नपछि ओलीले भने, ‘मैले गल्ती गर्दिनँ।’
२ जेठ २०७५ मा ओली र दाहालबीच भएको लिखित पाँचबुँदे सम्झौतामा अढाई वर्षपछि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख भएको विषयमा विवाद बढेपछि विवाद मिलाउन २०७६ मंसिर ४ मा अर्को समझदारी भएको थियो। त्यसमा दाहाललाई दल र ओलीलाई पाँच वर्ष नै सरकार सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको थियो। तर पनि नेकपाभित्र ओली दाहाल संघर्ष रोकिएन। त्यो अहिले बढेर उत्र्कषमा पुगेको छ। रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
संसद विघटनको मुद्दा फैसला चाँडै आउने
२६ जेठ, काठमाडौं – संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइको क्रममा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा असार दोस्रो साताभित्रै